၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၅ — ကင်းမျှော်စင် အွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက်
ဒီအပိုင်းအတွက် ဗီဒီယို မရှိပါ။
ဗီဒီယို ဖွင့်တာ အမှားရှိနေပါတယ်။
၁ ရာဇဝင်ချုပ် မာတိကာ
၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၅:၁
+၁ရ ၁၆:၄၁၊ ၄၂; ၂ရ ၅:၁၁၊ ၁၂; ၃၅:၁၅
၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၅:၃
+၁ရ ၁၆:၄၁၊ ၄၂
+၁ရ ၁၅:၁၆၊ ၁၈
၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၅:၄
+၁ရ ၁၅:၁၆၊ ၁၉
၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၅:၆
+၁ရ ၁၃:၈; ၁၅:၁၆; ၁၆:၅
၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၅:၈
၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၅:၉
+၁ရ ၂၅:၁၊ ၂
+၁ရ ၂၅:၁၊ ၃
၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၅:၁၀
၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၅:၁၂
၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၅:၂၀
+၁ရ ၂၅:၁၊ ၄
၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၅:၂၉
၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၅:၃၀
၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၅:၃၁
ကျမ်းပြိုင်တွေကို ကြည့်နိုင်ဖို့ အခန်းငယ်တစ်ခုကို နှိပ်ပါ။
၁ ရာ. ၂၅:၁၁ရ ၁၆:၄၁၊ ၄၂; ၂ရ ၅:၁၁၊ ၁၂; ၃၅:၁၅
၁ ရာ. ၂၅:၁၁ရှ ၁၀:၅
၁ ရာ. ၂၅:၁၁ရ ၁၅:၁၆
၁ ရာ. ၂၅:၃၁ရ ၁၆:၄၁၊ ၄၂
၁ ရာ. ၂၅:၃၁ရ ၁၅:၁၆၊ ၁၈
၁ ရာ. ၂၅:၃ဧ ၅:၁၉
၁ ရာ. ၂၅:၄၁ရ ၁၅:၁၆၊ ၁၉
၁ ရာ. ၂၅:၆၁ရ ၁၃:၈; ၁၅:၁၆; ၁၆:၅
၁ ရာ. ၂၅:၈ပ ၁၆:၃၃
၁ ရာ. ၂၅:၉၁ရ ၂၅:၁၊ ၂
၁ ရာ. ၂၅:၉၁ရ ၂၅:၁၊ ၃
၁ ရာ. ၂၅:၁၀၁ရ ၂၅:၁၊ ၂
၁ ရာ. ၂၅:၁၂၁ရ ၂၅:၁၊ ၂
၁ ရာ. ၂၅:၂၀၁ရ ၂၅:၁၊ ၄
၁ ရာ. ၂၅:၂၉၁ရ ၂၅:၁၊ ၄
၁ ရာ. ၂၅:၃၀၁ရ ၂၅:၁၊ ၄
၁ ရာ. ၂၅:၃၁၁ရ ၂၅:၁၊ ၄
၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၀:၁-၃၁
၂၅ ဒါ့​အပြင် ဒါဝိဒ်​နဲ့ အုပ်​စု​ခေါင်း​ဆောင်​တွေ​က ယေ​ဒု​သုန်၊+ ဟေ​မန်​နဲ့ အာ​သပ်​ရဲ့​သား​တ​ချို့​ကို စောင်း​တွေ၊ ကြိုး​တပ်​တူ​ရိ​ယာ​တွေ၊+ လင်း​ကွင်း​တွေ+ တီး​ပြီး ဘုရား​ကို ချီး​မွမ်း​ဖို့၊ ပရော​ဖက်​ပြု​ဖို့ သီး​သန့်​ခွဲ​ထား​တယ်။ အဲဒီ​လို​အမှု​ဆောင်​ဖို့ တာဝန်​ရထား​သူ​တွေ​ရဲ့ စာ​ရင်း​က​တော့– ၂ အာ​သပ်​ရဲ့​သား​တွေ​ထဲ​မှာ ဇ​က္ကုရ၊ ယော​သပ်၊ နာ​သနိ၊ အာ​ရှ​ရေ​လ။ သူတို့​က အာသပ်​ ညွှန်​ကြား​တဲ့​အတိုင်း လုပ်​ဆောင်​ရ​တယ်။ အာ​သပ်​က ဘုရင် ညွှန်​ကြား​တဲ့အတိုင်း ပရော​ဖက်​ပြု​ရ​တယ်။ ၃ ယေ​ဒု​သုန်​ရဲ့+ သား​တွေ​ထဲ​မှာ ဂေဒ​လိ၊ ဇေ​ရိ၊ ယေ​ရှာ​ယ၊ ရှိ​မိ၊ ဟာ​ရှ​ဘိ၊ မာ​တ​သိ။+ အဲဒီ​သား​ခြောက်​ယောက်​က ယေဟောဝါ​ကို ကျေး​ဇူး​တင်​ချီး​မွမ်း​သူ၊ စောင်း​တီး​ပြီး ပရော​ဖက်​ပြု​သူ ဖခင်​ယေ​ဒု​သုန် ညွှန်​ကြား​တဲ့​အတိုင်း လုပ်​ဆောင်​ရ​တယ်။+ ၄ ဟေ​မန်​ရဲ့​သား​တွေ​ထဲ​မှာ+ ဗု​ကိ​ယ၊ မသနိ၊ သြဇေ​လ၊ ရှေ​ဗွေ​လ၊ ယေ​ရိ​မုတ်၊ ဟာ​န​နိ၊ ဟာ​နေ​နိ၊ ဧ​လျာ​သာ၊ ဂိ​ဒါ​လ​တိ၊ ရောမ​န်​တေ​ဇာ၊ ယော​ရှ​ဗေ​က​ရှ၊ မေလော​သိ၊ ဟော​သိ​ရ၊ မဟာ​ဇုတ်။ ၅ သူတို့​အားလုံး​ဟာ ဟေ​မန်​ရဲ့​သား​တွေ​ပဲ။ ဟေ​မန်​ဟာ ဘုရား​ကို ဂုဏ်​တင်​တဲ့ သတင်း​စကား​ပါ​တဲ့ စိတ်​အာ​ရုံ​ကို ဘုရင်​ဆီ အသိ​ပေး​သူ​ဖြစ်​တယ်။ ဘုရား​သခင်​က ဟေ​မန်​ကို သား ၁၄ ယောက်၊ သမီး ၃ ယောက် ပေး​တယ်။ ၆ သူတို့​အားလုံး​က ဖခင်​ညွှန်​ကြား​တဲ့​အတိုင်း ဘုရား​သခင့်​အိမ်​တော်​လုပ်ငန်း​အတွက် လင်း​ကွင်း၊ ကြိုး​တပ်​တူ​ရိ​ယာ၊ စောင်း​တွေ တီး​ပြီး+ ယေဟောဝါ​ရဲ့ အိမ်​တော်​မှာ သီချင်း​သီ​ဆို​ကြ​တယ်။
အာ​သပ်၊ ယေ​ဒု​သုန်​နဲ့ ဟေ​မန်​တို့​လည်း ဘုရင်​ညွှန်​ကြား​တဲ့​အတိုင်း လုပ်​ဆောင်​ကြ​တယ်။
၇ သူတို့​ရော သူတို့​ညီ​အစ်​ကို​တွေ​ပါ ယေဟောဝါ​ကို ချီး​မွမ်း​သီ​ဆို​ဖို့ လေ့ကျင့်​ထား​သူ​တွေ၊ တီး​မှုတ်​သီ​ဆို​ရာ​မှာ ကျွမ်း​ကျင်​သူ​တွေ​ဖြစ်​တယ်။ စု​စု​ပေါင်း ၂၈၈ ယောက်​ရှိ​တယ်။ ၈ ကြီး​သူ​ငယ်​သူ၊ ကျွမ်း​ကျင်​သူ၊ မကျွမ်း​ကျင်​သူ မခွဲ​ခြား​ဘဲ မဲ​နှိုက်​ပြီး+ တာဝန်​ခွဲ​ဝေ​ယူ​ရ​တယ်။
၉ ဦး​ဆုံး​မဲ​ကျ​သူ​က​တော့ အာ​သပ်​ရဲ့​သား ယော​သပ်၊+ ဒုတိ​ယ​က ဂေဒ​လိ​နဲ့+ ညီ​အစ်​ကို​တွေ၊ သား​တွေ​အပါ​အဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၁၀ တ​တိ​ယ​က ဇ​က္ကုရ​နဲ့+ ညီ​အစ်​ကို​တွေ၊ သား​တွေ​အပါ​အဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၁၁ စတုတ္ထ​က အိ​ဇ​ရိ​နဲ့ ညီ​အစ်​ကို​တွေ၊ သား​တွေ​အပါ​အဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၁၂ ပဉ္စမ​က နာသ​နိ​နဲ့+ ညီ​အစ်​ကို​တွေ၊ သား​တွေ​အပါ​အဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၁၃ ဆ​ဋ္ဌ​မက ဗု​ကိ​ယ​နဲ့ ညီ​အစ်​ကိုတွေ၊ သား​တွေ​အပါ​အဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၁၄ သတ္တမက ယေ​ရှ​ရေ​လ​နဲ့ ညီ​အစ်​ကို​တွေ၊ သားတွေ​အပါ​အဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၁၅ အဋ္ဌမ​က ယေ​ရှာ​ယ​နဲ့ ညီ​အစ်​ကိုတွေ၊ သား​တွေ​အပါ​အဝင်​ ၁၂ ယောက်၊ ၁၆ နဝမ​က မသနိ​နဲ့ ညီအစ်​ကို​တွေ၊ သား​တွေ​အပါ​ အ​ဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၁၇ ဒသမ​က ရှိ​မိ​နဲ့ ညီ​အစ်​ကို​တွေ၊ သားတွေ​အပါ​အဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၁၈ ဆယ့်​တစ်​ယောက်​မြောက်​က အာ​ဇာ​ရေ​လ​နဲ့ ညီ​အစ်​ကို​တွေ၊ သား​တွေ​အပါ​အဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၁၉ ဆယ့်​နှစ်​ယောက်​မြောက်​က ဟာ​ရှ​ဘိ​နဲ့ ညီ​အစ်​ကို​တွေ၊ သား​တွေ​အပါ​အ​ဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၂၀ ဆယ့်​သုံး​ယောက်​မြောက်​က ရှု​ဗွေ​လ​နဲ့+ ညီ​အစ်​ကို​တွေ၊ သား​တွေ​အပါ​အဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၂၁ ဆယ့်​လေး​ယောက်​မြောက်​က မာတ​သိ​နဲ့ ညီ​အစ်​ကို​တွေ၊ သား​တွေ​အပါ​အဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၂၂ ဆယ့်​ငါး​ယောက်​မြောက်​က ယေ​ရ​မုတ်​နဲ့ ညီ​အစ်​ကို​တွေ၊ သား​တွေ​အပါ​အဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၂၃ ဆယ့်​ခြောက်​ယောက်​မြောက်​က ဟာ​န​နိ​နဲ့ ညီ​အစ်​ကို​တွေ၊ သား​တွေ​အပါ​အဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၂၄ ဆယ့်​ခု​နစ်​ယောက်​မြောက်​က ယော​ရှ​ဗေ​က​ရှ​နဲ့ ညီ​အစ်​ကို​တွေ၊ သား​တွေ​ အပါ​အဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၂၅ ဆယ့်​ရှစ်​ယောက်​မြောက်​က ဟာ​နေ​နိ​နဲ့ ညီ​အစ်​ကို​တွေ၊ သား​တွေ​အပါ​အဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၂၆ ဆယ့်​ကိုး​ယောက်​မြောက်​က မေလော​သိ​နဲ့ ညီ​အစ်​ကို​တွေ၊ သား​တွေ​အပါ​အဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၂၇ အယောက်​နှစ်​ဆယ်​မြောက်​က ဧလျာ​သာ​နဲ့ ညီ​အစ်​ကို​တွေ၊ သား​တွေ​အပါ​အဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၂၈ နှစ်​ဆယ့်​တစ်​ယောက်​မြောက်​က ဟော​သိ​ရ​နဲ့ ညီ​အစ်​ကို​တွေ၊ သား​တွေ​အပါ​အဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၂၉ နှစ်​ဆယ့်​နှစ်​ယောက်​မြောက်​က ဂိ​ဒါ​လ​တိနဲ့+ ညီ​အစ်​ကို​တွေ၊ သား​တွေ​အပါ​အဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၃၀ နှစ်​ဆယ့်​သုံး​ယောက်​မြောက်​က မဟာ​ဇုတ်​နဲ့+ ညီအစ်​ကို​တွေ၊ သား​တွေ​အပါ​အဝင် ၁၂ ယောက်၊ ၃၁ နှစ်​ဆယ့်​လေး​ယောက်​မြောက်​က ရောမ​န်​တေ​ဇာ​နဲ့+ ညီ​အစ်​ကို​တွေ၊ သား​တွေ​အပါ​အဝင် ၁၂ ယောက်​ဖြစ်​တယ်။
မြန်မာ စာစောင်များ (၁၉၈၄-၂၀၁၉)